IVidiyo: Ukulahlwa kwenqwelo yokuthenga kunye neListrak | Martech Zone
Ividiyo: Ukulahlwa kwinqwelo yokuthengela kunye noListrak
NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Douglas Karr
Rhoqo ngexeshana ngelixa ubrawuza Youtube, ufumana igugu. Le vidiyo ivela kuListrak yapapashwa ngoFebruwari xa babesungula isisombululo sabo sokulahla inqwelo yokuthenga, kodwa bendifuna ukuyipapasha apha ngenxa yezizathu ezimbalwa. Okokuqala, sisishwankathelo esihle sokuba yeyiphi inqwelo yokuthenga ishiywe… ngokulandelayo, yividiyo entle kwaye ndiyathemba ukuba uListrak uvelisa ezinye zazo.
Nazi ezinye izinto eziphambili ezivela kwi- Uluhlu lweenkcukacha zoluhlu lweemveliso:
Ngokwendawo kaListrak, iinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo kwi-Intanethi zingumba Ixabisa abathengisi abakwi-Intanethi ama-71% eenguqu zabo ezilingana ne- $ 18 yezigidigidi ngonyaka. Indawo kaListrak ine ikhalityhuleyitha yokufumana kwakhona inqwelo ngoko ke unokuqikelela ngokukhawuleza ilahleko yakho.
Uludwe lweListrak lokulahla inqwelo yokuthenga isisombululo sokuphinda sithathe iinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo kwaye sinike namathuba okubandakanya abathengi kwakhona ngezixhobo ezenzelwe wena kunye nemiyalezo efanelekileyo. Sebenzisa isoftware yabo, umkhankaso wokuzibandakanya kwakhona unokuba yi-imeyile enye okanye unokukhulisa ukuhambisa ii-imeyile ukukhulisa uguquko.
Ukulahlwa kwinqwelo yokuthenga akuyona nje into ene-eCommerce. Nasiphi na isiza senkampani esisetyenziselwa iinzame zokungena ngaphakathi zihlala zinobuthathaka apho iindwendwe zilahleka khona kwinkqubo yokuguqula. Ngamaxesha athile, kungenxa yokuba ubeko olubi aluboneleli ngenkuthazo yokuzibandakanya ngakumbi. Ezinye iingxaki zinokuba yifom ebanzi, ixesha lokulayisha kancinci, okanye eminye imiba.
Ukuba ungaphuhlisa iindlela zokuzibandakanya kwakhona kubaphulaphuli, uya kufumanisa ukuba amaqondo akho okuguqula aya kudlula kulo naluphi na uguquko olufumana kwiindwendwe ezintsha.